Intsingiselo yophawu kwibhotile yeoyile ebalulekileyo
ngomphathi ku 20-12-18
Ngokwesiqhelo, kukho imiqondiso emine eqhelekileyo kwiibhotile zeoyile ecokisekileyo, ke makhe sijonge kwiintsingiselo ezahlukeneyo ezimele zona: 1. Ioyile eQhelekileyo eQhelekileyo yeoyile ithi yiSulungekile, ayinayo imichiza eyenziweyo kwaye ayichazwanga ngeoyile yemidiya. . 2. IAromatherapy yeoyile Aromatherapy ...
Indlela yokukhetha amandla kunye nokupakishwa kwebhotile yeoyile eyimfuneko
Ukusukela kuphuhliso lweshishini lwanamhlanje kukhokelele ekusetyenzisweni okuglasi kweglasi, iibhotile zeglasi ezimnyama (ezimnyama, eziluhlaza, noluhlaza okwesibhakabhaka) ubukhulu becala ziye zalawula ukupakishwa kweoyile. Ngophuhliso lwebhotile yeglasi yesayensi kunye netekhnoloji ayisaxinaniswanga ngombala omnyama, luhlaza, kunye luhlaza okwesibhakabhaka, umzekelo, iqabaka ...
Buyisela irattan yearomatherapy rhoqo
Vula isivalo sebhotile, cwilisa isiphelo se-rattan kulwelo lwe-aromatherapy, ulukhuphe emva kokuba i-rattan imanzi, emva koko ubeke esinye isiphelo ebhotileni. Ukuba isetyenziswe kwisithuba esincinci (njengendawo yokuhlambela), intwana encinci yeentonga zerattan inokufakwa ukufezekisa umphumo; ukuba ngu ...
Indlela yokongeza iziqholo kwibhotile yeglasi
Amanyathelo okuzalisa ibhotile yeziqholo etywiniweyo kunye nesiqholo ngala alandelayo: a. Pura ibhotile yesiqholo ngamanzi. Emva koko faka amathontsi ambalwa eviniga kunye namanzi ebhotileni, uphinde ucoceke kwakhona. Eli nyathelo lelokubulala iintsholongwane. Isirinji nayo kufuneka icocwe kakuhle. Kwaye ...
I-COMI AROMA Iingcebiso zeDeeduser yeArhente
Zeziphi izinto ezahlulahlula ingcongolo kwaye zisebenza njani? Ii-diffusers zeRed zithandwa kakhulu kwivumba lasekhaya ngoku. Zilula kakhulu ukuzisebenzisa; Iingcongolo zifakwa kwibhotile yeglasi okanye ingqayi yeglasi yeoyile evuthayo, iingcongolo zifunxa ivumba kwaye zikhuphe ivumba elimnandi kufutshane nekhaya lakho - ...
Kutheni le nto kufuneka siphinde sisebenzise iibhotile zeglasi?
Kubomi bethu bemihla ngemihla, iibhotile zeglasi ziyabonakala kwindawo yonke.Iibhotile zeglasi ziqabane elikhulu leziselo, amayeza, izinto zokuthambisa, njl. Imixholo, ...
Njani na inkqubo yokubumba ngebhotile yeglasi?
Ngokuphuhliswa kweebhotile zeziqholo, zininzi kwaye zintle kakhulu iimilo zebhotile zabasebenzisi onokukhetha kuzo. Ke zenziwe njani iimilo zezi bhotile? Inkqubo yokubumba yebhotile yeglasi lulandelelwano lwezenzo (oomatshini, i-elektroniki, njl.
Ukusetyenziswa kwemihla ngemihla kweebhotile zeTyhubhu
ngomphathi ku 20-12-10
Iibhotile zeglasi zahlulwe zaziindidi ezimbini, enye yibhotile ebunjiweyo kwaye enye yibhotile yebhotile. Iibhotile ezibunjiweyo zisetyenziselwa i-aromatherapy, i-perfume, ii-oyile ezifanelekileyo, njl njl.
Indlela yokwahlula phakathi kwebhotile ebunjiweyo kunye nebhotile yebhotile
Iindlela zemveliso yeebhotile zeglasi zahlulwe zangumngxunya wokubumba kunye netyhubhu, ke yintoni umahluko ophambili phakathi kweebhotile ezibunjiweyo kunye neebhotile zetyhubhu? Siza kuhlalutya le miba mithathu ilandelayo: 1. Inkangeleko yahlukile, ukubonakala kwebhotile yetyhubhu kujongeka kukhanya, kungcono kancinci, ...
Imbali yokwenza iiglasi
Imbali yokwenza iglasi inokulandelwa emva eMesopotamiya malunga ne-3500 BC Ubungqina bezinto zakudala bubonisa ukuba iglasi yokuqala yokwenyani yenziwa kunxweme lomntla weSyria, iMesopotamiya okanye i-Egypt yakudala. Izinto zokuqala ezaziwayo zeglasi zazisusela ngonyaka ka-2000 BC kwaye zisenokuba ngengozi imveliso ...
Iibhola zenze njani kwibhotile yeglasi yeziqholo?
Kwimveliso yeglasi yeglasi yeebhotile, ibhabhu yenye yeengxaki ezihlala ziphazamisa amashishini emveliso. Nangona amaqamza engawuchaphazeli umgangatho, zichaphazela kakhulu i-aesthetics. Kwaye ...
Ukudibanisa njani iioyile ezifanelekileyo
Indlela yokudibanisa iioyile eziyimfuneko Izinto zeoyile ezixabisekileyo kwaye kulula ukuzitshintsha, ke kufuneka kuthathelwe ingqalelo xa uzilungiselela. Akucetyiswa ukuba uhlengahlengise ngakumbi ngexesha elinye ukunqanda inkunkuma.Iindidi ze o ...
Indlela elungileyo yokugcina iioyile ezifanelekileyo
1. Faka ii-oyile ezifanelekileyo kwiibhotile zeglasi ezimnyama Ii-oyile eziyimfuneko zitshintshile, ziyamelana nokukhanya kwaye ziyabola, ke kufuneka zigcinwe kwiibhotile zeglasi ezimnyama. Iibhotile zeplastiki azinakusetyenziselwa ukugcina iioyile ezifanelekileyo. Umgangatho weoyile eyimfuneko uya konakaliswa ukuba ukwenziwa kweekhemikhali zeplastikhi i ...
Inkqubo yemveliso yeglasi ityhubhu yeglasi
Namhlanje, siya kukuthatha ukuze uqonde inkqubo yemveliso yeglasi ityhubhu yeglasi: Okokuqala, faka ityhubhu yeglasi enobubanzi obufunwa ngumthengi kumatshini. Inkosi iya kulungelelanisa umatshini kakuhle kwaye yenze ityhubhu yeglasi ibe yimilo yebhotile emiselweyo kunye nebayonet okanye iscr ...
Ithini intsingiselo yenani elisezantsi kwebhotile?
Sihlala sifumana oonobumba okanye amanani asezantsi kwiibhotile zeglasi. Abathengi abaninzi bayabuza ukuba athetha ntoni la manani. Zimele ntoni? Ngokwesiqhelo izixhobo zokuvelisa ibhotile yeglasi yile:
Ukuqonda ngokuchanekileyo iioyile ezifanelekileyo
1. Zithini iioyile eziyimfuneko Zintoni iioyile ezifanelekileyo? Ngokwemigqaliselo: Ioyile ebalulekileyo luhlobo lwe "oyile", uhlobo oluthile lweoyile. Isizathu sokuba ikhetheke kukuba iyabiza kwaye ilula, kuba yioyile ebalulekileyo, umphefumlo wesityalo, kunye nesithako esikhutshiweyo ...
Izizathu zamaxabiso ahlukeneyo eebhotile zeglasi
Ngaba iibhotile zeglasi eziqhelekileyo zinetyhefu? Iibhotile zeglasi ezithengiswa yiTaobao ngeedola ezimbalwa zisetyenziselwa ukugcina ukutya. Ngaba kukhuselekile ukwenza iwayini okanye iviniga? Ngaba iya kunyibilikisa izinto eziyityhefu? Kutheni le nto iimveliso zangaphandle zeebhotile zeglasi zithengiswa zibiza kakhulu? Ngaba iibhotile zeglasi eziqhelekileyo zingakhuselekanga?
Ivumba-levumba kukuzisela incasa entle
Kukho isigwebo esingalibalekiyo kwi-The Dynasty literati's "Dream Lianglu": "Tshisa isiqhumiso, khomba iti, xhoma imifanekiso kwaye uhlele iintyatyambo, iindidi ezine zamanzi, hayi ikhaya elidiniweyo. Intsingiselo ngokubanzi yile: wan ...
Imbonakalo yeglasi kwiBhotile yeglasi yeHlabathi
Uphando kunye neeMarike zikhuphe ingxelo yeglasi yeBhotile ye-Market Outlook (2019-2027) .Ngokwengxelo, iglasi yeebhotile ezipakishwe kwimakethi, ezathi zangama-63.77 ezigidi zeedola ngo-2019, kulindeleke ukuba zifikelele kwi-US $ 105.44 yezigidigidi ngo-2027, nge Ukukhula kwinqanaba lokukhula konyaka kwe-6.5% ngexesha le-t ...
Ubungqina linyathelo eliphambili kwimveliso yebhotile yeglasi
Umgangatho weebhotile zeglasi unxulumene ngokusondeleyo noyilo kunye nomgangatho wezinto, izixhobo zemveliso kunye nokuvelisa ukungunda. Ukungqina linyathelo elibaluleke kakhulu kwimveliso. Ubungqina buchaphazela ngokuthe ngqo iindleko zemveliso kunye nomgangatho webhotile yeglasi, ke kufuneka ithathwe ngokungathí sina. 1. Th ...
Yintoni i-frosting kunye ne-hollowing technology yeebhotile zeglasi
Itheyibhile yokuqhekeza kukuqhoboshela isisombululo sesisombululo okanye umbala weglasi we-glaze powder kwimveliso yeglasi yeglasi, kwaye emva kokubhaka okuphezulu kwi-580 ~ 600 ℃, umbala weglasi we-glaze uyanyibilika kumphezulu webhotile yeglasi ukuyenza kuvela indlela yokuhombisa enomahluko ...
Imveliso kunye nokupakishwa kwenkqubo yeebhotile zeglasi
Kukho amanyathelo ama-6 ukusuka kwimveliso ukuya ekupakisheni ibhotile yeglasi: Ukubamba, Ukunyibilika, Ukuvuthela, ukuHanjiswa, ukuHlola, ukupakisha. Ukubamba izinto zokwenza izinto ezinje ngesanti, abicah, kunye nelitye lekalika zixutywe kwaye zihlala zondliwa eziko. Izinto zokunyibilikisa ziyafudunyezwa kwaye zinyibilike ngaphakathi eziko. Si ...
Imfihlo encinci ye-Fomeless aromatherapy-Natural rattan VS Fiber rattan
I-rattan yendalo: IiRattan zihlala zizityalo zendalo ezinje ngemidiliya emhlophe, imingcunube / imidiliya okanye iingcongolo. Zombini iziphelo zemidiliya zizele ziipore, kwaye ubude kunye nokugoba komthi ngamnye kwahluke kancinane. Ifayibha Rattan: Kuba Rattan eyenziwe ifayibha, pores le rattan basasazwa ngokulinganayo t ...
Izinto eziluncedo ze-aromatherapy engenabala
Zininzi iintlobo ze-aromatherapy, i-aromatherapy engenasiphelo, i-aromatherapy yamakhandlela, i-aromatherapy yemoto, njl.njl. Zonke iintlobo ze-aromatherapy zinezibonelelo kunye nezinto ezingalunganga. Kule nqaku, siza kuxubusha ngoncedo lwe-aromatherapy engenasici. & ...